Ernesto Valverde oo si weyn u amaanay Lionel Messi kaddib saddexleydii uu xalay ka dhaliyay Real Mallorca – Gool FM
Dajiye December 8, 2019
(Barcelona) 08 Dis 2019. Tababaraha Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa ku amaaney Lionel Messi, kaddib qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa uu ku soo bandhigay kooxdiisa kulankii ay xalay kula ciyaareen naadiga Real Mallorca garoonka Camp Nou.
Ernesto Valverde ayaa dhanka kale ku dooday in Lionel Messi uu u cadeeyay qof walba sababta uu ugu qalmo inuu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or.
Lionel Messi oo dhawaan ku guuleystay markiisii lixaad abaal-marinta Ballon d’Or ayaa xalay dhaliyay saddex gool, kulankii ay kaga adkaadeen kooxda Mallorca 5-2, kaasoo ka tirsanaa kulamada 16-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Yeelkeede, macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa kaddib ciyaarta wuxuu ka soo muuqday shir jaraa’id wuxuuna u sheegay warbaahinta.
“Qaab ciyaareedkii uu sameeyay Messi? Waxay ahayd dabaal deg weyn kaddib markii uu ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or”.
“Messi wuxuu tusiyay qof walba sababta uu ugu qalmo inuu ku guuleysto Abaal-marinta Ballon d’Or, marka loo fiiriyo qaab ciyaareedkiisa ​​kulankii Real Mallorca”.
“Wuxuu dhaliyay seddex gool oo aad u qurux badan, way adag tahay in sidan la sameeyo maalin walba, laakiin waxaan rajeynayaa inaysan taasi dhammaan doonin”.